Semalt Expert: Ahoana ny fanakanana ny dokambarotra amin'ny Android Apps, Games and Browsers
Nanjary ratsy ny dokambarotra, ary ny rindrambaiko sy vohikala samihafa dia manome rindrambaiko maimaim-poana, maimaimpoana maimaim-poana, ary tolotra maimaim-poana noho ny dokam-barotra. Noho izany, ireo mpandraharaha mpanome tolotra dia tokony hanolotra dokam-barotra ho an'ny mpitsidika azy ireo ary hamoaka vola ho an'ny fitazonana azy ireo any amin'ny tontolon'ny raharaham-barotra mandritra ny fotoana maharitra. Ilainy ihany koa ny fidiram-bola ho an'ny fampiantranoana sy ny serivisy ary ny fandrosoana. Ny mpampiasa dia mandray ny tombony amin'ny fampiasana ny vokatra ho an'ny fahalalahana. Na dia izany aza, ny toerana fanaovana dokam-barotra dia maneho fientanentanana sy mitondra anjara biriky amin'ny traikefan'ireo mpampiasa tsy dia tsara loatra.
Eto amin'i Michael Brown, mpanazatra ambony avy amin'ny Semalt Digital Services, dia hilaza aminao fomba fohy hanakanana ny dokambarotra ao amin'ny fitaovana Android ianao - data protector backup in Portland.
Azonao atao mora foana ny misorata dokam-barotra marobe amin'ny fisehoanao amin'ny lalao sy ny fampiharana, ary koa ny navigateur anao. Manantena izahay fa ireo fomba ireo dia hiasa ho an'ireo fitaovana tsy voatery sy fotsy, fa alohan'ny hanombohanay, tokony hanana mpandraharaha File toa ny Astro File Manager. Azo ampiasaina ihany koa ny mpitantana solosaina sasany, fa tokony hiezaka hanakana ny dokam-barotra amin'ny loza mety hitranga aminao. Tsy tompon'andraikitra amin'ny vokatra hafa eo amin'ny fitaovana Android ianao.
Method # 1. Adblock Plus (ABP)
Amin'io fomba io dia hampiasa ad blockers ianao (fampihetsiketsehana) hanakana ny dokam-barotra rehetra ao amin'ny app Android, toy ny doka izay aseho amin'ny lalao sy apps samihafa. Soa ihany, misy ad-blockers samihafa ho an'ny mpampiasa Android sy ny mpandrindra app..Ny tsara indrindra anefa dia AdAway sy Adblock Plus (ABP). Azonao atao ny mametraka ny iray amin'ireo fandaharam-pianarana ireo araka ny zavatra takinao sy ny andrandrainao. Raha te hanakana ny dokambarotra amin'ny Adblock Plus ianao dia avelao aho hilaza fa io dia programa misokatra mivantana ary misy safidy ahafahana mametraka ireo dokam-barotra tsy manan-kery. Io fomba fanao io dia mety ho an'ny fitaovana tsy fotsy sy fotsy. Azonao atao ny mametraka mora foana ny fampiharana ad blocker amin'ny fitaovana misy anao, fa ny fangatahana eo amin'ny sehatr'asa dia ilaina foana raha vao nesorin'i Google ny fandefasana app-block rehetra ao amin'ny Google Play Store.
Method # 2. Atsaharo ny doka miaraka amin'ny rakitra 'hosts'
Azonao atao ny manakana mora foana ny dokam-barotra rehetra tsy ampiasaina amin'ny fampiasana ny rakitra tompony. Ity fomba ity dia ahafahanao misoroka dokam-barotra maromaro ao amin'ny ordinateranao androany ary miasa ho an'ny fitaovana fotsy fotsiny. Fichier host iray dia rakitra tsotra ao amin'ny rafitra fiasanao. Raha te hanomboka tranonkala mampiasa ny anaran'ny mpampiantrano ianao, ny rafitra fandidiana dia hikaroka ity rakitra tompona ity hanombanana ny adiresy IP mifanaraka aminy. Raha mahomby izany, dia hampiasaina ny adiresy IP nomerika. Raha tsy izany, ny DNS (Domain Name Service) dia hahazo fangatahana amin'ny fomba hahitana ny IP amin'ny anaran'ny mpampiantrano. Afaka mametraka mora foana ny rakitra tompona ianao. Noho izany, tokony handeha any amin'ny MVPs ianao ao amin'ny tranokala izay hisokatra ny rakitra tsotra. Alefaso any amin'ny solosainao ary tadiavo ny rakitra tompony avy eo amin'ny vatanao Android.
Aza adino ny manamarika ny làlan'ny rakitra. Ao amin'ny fitaovana Android anao, tokony hanokatra ny mpitantana ny solosaina ianao ary handika ny rakitra tompona any amin'io toerana io.
Marina fa mampikorontana sy manelingelina ny dokambarotra, saingy fomba tsara ahafantarana ireo vokatra farany, serivisy, tranokala, ary fampiharana. Tokony hamela dokam-barotra tsy misy fisalasalana ianao hampisehoana ny hevitr'izy ireo momba ny fironana amin'izao andro izao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ireo rindrambaiko karama mba hampitsaharana ireo doka ireo amin'ny fanelingelenana anao amin'ny aterineto.